ဆရာတော် တရားဟောချက်မှာ ကျမ်းပုဒ် ဆာလံ၄၆ ငြိမ်ဝပ်စွာရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေ စိတ်ပူနေကြတုန်းပဲဆိုရင် စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့၊ အဓိကအချက်ဟာ အရင်းခံမေတ္တာမရှိသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဂပေမေတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်။ လူတွေက ခွဲခြားပြီး ချစ်ကြပေမဲ့ သခင်ခရစ်တော်ကတော့ ဘာမှမခွဲခြားပါဘူး။ စာတန်ကလွဲရင် အားလုံးကို ချစ်ပါတယ်။ အားလုံး တစ်နေ့မှာ သခင့်ရှေ့မှောက် စီရင်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ်းစာမှာလာသည်မှာ သင်စိုက်သည့်အတိုင်းရိတ်သိမ်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆုတောင်းကြပါစို့။
ပွဲတော်ကို မုန့်နဲ့စပျစ်ရည် အတူဝေငှပေးပြီး စားသုံးပါတယ်။ သခင်ယေရှု ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသေခံခြင်းကို အောက်မေ့သတိရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
English Service 9;30
Jesus teach us, Love the God. YES .. then, love each other YES,...Nowaquestion.. Love the enemies? (All quiet, only old people said, YES)
This teaching is impossible. But I will continue with Bible.John 13;34 (RSV)
A new commandment I give to you, that you love on another. even as I have love you that you also love another.. Amen
8 facts of "unable to love the enemies".. No.1 Lack of Love isaSIN (come from Satan)
Last word is 1Col 13 .. Love is Patient.... etc
Closing word, Unseen God to see his people , n one seen God. If we ove each.. 1John 4;12
ဆရာဆမ်ဆင် IBC Yangon (ဧမာနွေလနှစ်ခြင်းအသင်းတော်)
ပညတ်တော်၁၀ပါး၊ အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုရင်း ချဲကားလာတော့ရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။ ငါမှတပါးအခြားသောဘုရားကို မကိုးကွယ်ရ... ဆိုတာကို ဘုရားများစွာရဲ့အထက်မှာခရစ်တော်ရှိတယ်လို့ ဖွင့်ဆိုသူတွေကြောင့် ရောထွေးကုန်ပါတယ်။ အခြားဘုရားအကြောင်း ပြောစရာမလိုပါ။ ခရစ်တော်အကြောင်းပဲ ပြောဆို၊ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ဖို့လိုပါတယ်။ အလားတူပဲ ပညာတ်တရားများကို လိုက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်နေရင် ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ယေရှုကြွလာပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို ပြသသွားပါတယ်။
သူဥစ္စာမခိုးရလို့ ပညာတ်ရှိပါတယ်။ အစည်းဝေးနောက်ကျမှလာခြင်းလည်း အချိန်ကိုခိုးခြင်းဖြစ်တယ်။ ဥက္ကဌကအချိန်နောက်ကျတယ်ဆို အစည်းဝေးတက်ရောက်သူအားလုံးရဲ့ အချိန်တွေ ခိုးယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခွန်မဆောင်ခြင်း၊ အာဏာသုံးပြီး အခွင့်ရေးယူခြင်း၊ ခြစာခြင်းများလည်း ခိုးယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုးသောမိန်းမကို ပညတ်တရားနဲ့ ခဲပေါက်သတ်ဖို့ စီရင်တဲ့အခါ၊ သခင်ယေရှုက အပြစ်မရှိတဲ့လူ ခဲနဲ့ပေါက်ပါလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အပြစ်ရှိသူများ ခဲလုံးချပြီး ထွက်သွားတဲ့အချိန် ဆိုးသောမိန်းမက သခင်ယေရှုခြေတော်ရင်းကို တိုးဝင်လာပါတယ်။ သင့်ကိုလည်းငါမစီရင်... နောက်ကိုမလုပ်ပါနဲ့...လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အပြစ်လုံးဝမရှိတဲ့ သခင်ယေရှုတောင်မှ ဆိုးသောမိန်းမကို မစီရင်တော့ ကျွန်တော်တို့လည်း သူ့တပါးကို ဘာလို့စီရင်စရာလိုပါသလဲ?
ပညတ်တရားနဲ့ အသင်းတော်ကို စီမံခန့်ခွဲဖို့က သိပ်လွယ်ပါတယ်။ ဖောက်ပြန်၊ဆိုးသွမ်းသူကို အသင်းတော်မလာနဲ့၊ ထုတ်ပယ်လိုက်ခြင်းဟာ လွယ်ပါတယ်။ သူတို့ကို သခင်ယေရှုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ လမ်းမှန်ရောက်လာဖို့ ပြောဆိုခြင်းက ယေရှုမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။ မထိုက်တန်ပေမဲ့ ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့ ကျေးဇူးတော် Grace ဆိုတာရှိပါတယ်။ အံ့သြဘွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်၊ နေထိုင်ပြီး၊ ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့ အလုပ်များ လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်။
ဓမ္မသီချင်းများကို သီဆိုကျူးဧရင်း မနက်ပိုင်းကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းအဆုံးသတ်ပါတယ်။ 15-May-2014
ပဲခူး၊ တိုက်ကြီး၊ လှည်းကူး ခရီးစဉ်၊ စိန့်ဂျိုးဇက် ဘုရားကျောင်းကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရိုမင်ကာသိုလစ် ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။
သခင်ခရစ်တော် ဖွားမြင်ပြီးတဲ့နောက် အနှစ်၃၀၀ အတွင်းမှာ ကနဦးအသင်းတော်များဟာ ရိုမင်ကာသိုလစ်များလို့လဲ ခေါ်လို့ရပါတယ်။ ပထမဆုံး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဟာ ရှင်ပေတရုဖြစ်ပါတယ်။ ရောမမြို့၊ အခု ဗာတီကန်မြို့တော်မှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းများနဲ့၊ ရိုမင်ကာသိုလစ်ဌာနချုပ်ရှိပါတယ်။ ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အခုခေတ် ပရိုတက်စတင့်အသင်းတော်များ မက်သဒစ်၊ နှစ်ခြင်း၊ သတ္တမနေ့၊ အင်္ဂလီကန်၊ အေဂျီ၊ လူသာရီယန်၊ ပရက်ပီရီယန်း စတဲ့အသင်းတော်များဟာ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုကို ကိုးကွယ်တာချင်း အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် (၃)ပါးတစ်ဆူ အတူတူ ဖြစ်ပေမဲ့၊ ကိုးကွယ်တဲ့ စတိုင်၊ မတူညီတဲ့အတွက် သီးခြားလို့ ထင်ရပါတယ်။ မြန်မာများက ရိုမင်ကာသိုလစ်များကို ဘုရင်ဂျီလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရိုမင်ကာသိုလစ်၊ ခရစ်ယန်များ မြန်မာပြည်ကို ရောက်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်နောက်လိုက် ညီအစ်ကို မောင်နှမအချင်းချင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုမင်ကာသိုလစ်များက ဗဟိုဦးစီးစနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးဆိုတာ အိမ်ထောင်မပြုရဘူး သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီး ပထမအဆင့်ကို ဘရာသား Brother လို့ခေါ်ပြီး၊ ဒုတိယအဆင့်ကို ဖာသာ Father လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒေသအလိုက် ဘစ်ရှော့ Bipshop လို့ခေါ်တဲ့ အဆင့်မြင့် ဘုန်းတော်ကြီးများ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံအလိုက်ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကာဒီနယ် လို့ခေါ်တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးများ ရှိပြီး၊ အဆင့်အမြင့်ဆုံးကတော့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကာသိုလစ်သီလရှင်များလည်း ရှိပါတယ်။ ကာသိုလစ်ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းများက နေ့တိုင်း၊ ဖွင့်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း ဘုရားရှိခိုးပြီး၊ နေ့တိုင်းပွဲတော်ဝင်ခြင်း ရှိပါတယ်။
ပရိုတက်စတင့်ခရစ်ယန်များကတော့ ကိုယ့်အသင်းတော်လူကြီးအဖွဲ့၊ ကိုယ့်သင်းအုပ်ဆရာနဲ့ပဲ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ အိမ်ထောင်မိသားစုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ အိမ်ထောင်ရှိမှ သင်းအုပ်ဆရာအဖြစ် ခန့်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ခရစ်ယာန်စုစုပေါင်း သန်း၂၀၀၀ (၂၀၁၄) ရှိပါတယ်။ ရိုမင်ကာသိုလစ်ခရစ်ယာန် သန်းပေါင်း ၁၂၀၀၊ ပရိုတက်စတင့်ခရစ်ယာန် သန်းပေါင်း၈၀၀ ရှိပါတယ်။ မက်သဒစ်၊ နှစ်ခြင်း၊ သတ္တမနေ့၊ အင်္ဂလီကန်၊ အေဂျီ၊ လူသာရီယန်၊ ပရက်ပီရီယန်း စတဲ့အသင်းတော်များဟာ ပရိုတက်စတင့်ခရစ်ယန်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယအများဆုံးက ရိုမင်ကာသိုလစ်ခရစ်ယာန်များ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြား ကာသိုလစ်အသင်းတော် အမြောက်အများ ရှိပါတယ်။ ဂိုလမ်းပေါင် ပြုစုတဲ့ အခြေပြမြန်မာ့ခရစ်ယာန်သမိုင်း စာအုပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ၂၀၁၀ လူဦးရေ ၅၉.၇၆သန်းမှာ ခရစ်ယာန် ၄.၉၈% (၂.၈၇သန်း) ရှိတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ နှစ်ခြင်း ၅၁% (၁.၄သန်း)၊ ရိုမင်ကာသိုလစ် ၂၂% (၆သိန်းခွဲ)၊ သတ္တမနေ့ (၂သိန်းခွဲ)၊ မက်သဒစ် ၂သိန်း၇သောင်း၊ အေဂျီ တစ်သိန်းတစ်သောင်း ..စသဖြင့် အရေအတွက်ရှိပါတယ်။ အရေအတွက်ထက် ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကို ပုံသက်သေပြနိုင်သူ ပိုမိုများပြားလာဖို့ ၊ ဘုရားဘုန်းတော် ပိုပြီးထင်ရှားလာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
(နေ့စဉ်) ဆရာတော်များနှင့်အတူ အထူးဆုတောင်းရန် (ဧမာနွေလအသင်းတော်၊ ရန်ကုန်)
- နိုင်ငံတော်သမ္မတမင်းအတွက်၊ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများအတွက်
- ပြည်တွင်းစစ်များရပ်စဲရန်အတွက်၊ ကမ္ဘာတဝှမ်းငြိမ်းချမ်းရန်အတွက်၊
- TTI ကျောင်းတော်ကြီးအတွက်
- ၅နှစ်စီမံကိန်း၊ ၃လီအောင်မြင်ရေးအတွက် သင်းအုပ်ဆောင်၊ ဆောက်ရန်(အလုံ)အတွက်
- ဒုက္ခရောက်သူများ၊ ဝမ်းနည်းကြေကွဲသူများအတွက်၊ မိဘမဲ့ကလေးများအတွက်
- မုဆိုးဖို၊ မုဆိုးမများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူများအတွက်
- စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်များ၊ တိုင်းတပါးတွင်လုပ်ကိုင်နေရသူများအတွက်
- သင်္ဘောသားများ၊ မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူများ၊ လေယာဉ်မောင်းနှင်သူများအတွက်
- ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများအတွက်
- ဖျားနာသူများ တစ်ယောက်စီအတွက်၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းရောက်နေသူများအတွက်
- မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းနေသူများ၊ HIV နှင့်နာတာရှည်ရောဂါသည်များအတွက်၊
ဧမာနွေလအသင်းတော်နှင့် ဆက်စပ်နွယ်သော အသင်းတော်အားလုံးနှင့်ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ မစ်ရှင်များအတွက် နေ့စဉ်ဆုတောင်းချက်စာရွက်မှ ကူးယူတင်ပြပါသည်။
သခင်ခရစ်တော်ထံက လူနာတစ်ဦးထမ်းလာပြီး၊ လူအုပ်ကိုမဖေါက်နိုင်လို့ ခေါင်မိုးပေါ်က အပေါက်ဖေါက်ချတဲ့အချိန် သခင်ခရစ်တော် လူနာသယ်လာသူများရဲ့ မျက်နျာကို ကြည့်ပါတယ်။ သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကြောင်း လူမာအနာရောဂါပျောက်ကင်းစေပြီ လို့ ပြောပါတယ်။ လူနာဟာ ထပြီးလမ်းလျှောက်၊ကျန်းမာလာပါတယ်။
ယုံကြည်ခြင်းဟာ မက်ျစိနဲ့ တကယ်မြင်ရပါတယ်။ သင်းအုပ်ဆရာရဲ့မျက်နျာကိုကြည့်ပြီးမှာ အသက်ရှင်နေသူများစွာ ရှိပါတယ်။ သင်းအုပ်က ငွေအရေးကြီးတယ်ခံယူရင် အသင်းတော်တခုလုံး ငွေနောက်လိုက်ပါတယ်။ ပါးစပ်က ယုံကြည်ခြင်းလို့ တဖွဖွပြောပေမဲ့ ပါးစပ်က အလှုငွေလိုက်တောင်းနေ၊ မြေအိမ်ခြံလိုက်အလှုခံနေရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ယုံကြည်သူလို့ ပြောနိုင်မလဲ။
ရန်ကုန်မြို့ အလည်ခေါင် အနော်ရထားလမ်းက အသင်းတော်၂ခု ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ထားပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ သစ်လွင်တောက်ပြောင်နေတဲ့ ဦးနောအသင်းတော်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ခုကတော့ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေံနေတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားကတော့ အတူတူဖြစ်ပေမဲ့ ကူညီဖေးမမှု လိုအပ်နေတဲ့ အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ်မထားကြပါတယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေနေသူများ ယုံကြည်ခြင်းလို အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ဘုရားသားသမီးမှန်ရန် ဆင်းရဲမွဲတေမနေပါဘူး ။ ယနေ့ဖတ်ရန် သုတ္တံ၃၀မှာ ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ငွေရတတ်ခြင်းမပေးပါနဲ့လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ အားလုံး ဝိညာဉ်၊ ခန္တာ ကြွယ်ဝချမ်းသာပါစေလို့ .. မသဲ၆း၃၃ (နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရှေးဦးစွာရှာကြလော့. နောက်မှ ထိုအရာများကို ငါပေးတော်မူလတ္တံ)။
စေတနာ Cedenar Learning Center (English School)၊ စေတနာအင်္ဂလိပ်စာဆရာမများ (ပုသိမ်) အမေရိကန်အလှုရှင်များမှ မတည်ပေးသည်။ ခရစ်ယာန်များစွာ ရှိသော ဒေသဖြစ်ပြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်း ကရင်ဝန်ကြီးတစ်ဦးကို ခန့်ထားရသည်။ စကောကရင်၊ ပိုးကရင်၊ မြန်မာ၊ တရုပ်၊ ကုလား အသင်းတော်များစွာ ရှိသည်။ စကောကရင် ကိုသာဖြူကျမ်းစာသင်ကျောင်းကြီးမျာ ကြီးကျယ်လှသည်။ ၂၀၁၃ ကရင်နှစ်သစ်ကူပွဲကို ခမ်းနားစွာ ကျင်းပကြသည်။ အများစုမှာ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းတော်များ ဖြစ်ကြသည်။
ကာသိုလစ်ဘုရားကျောင်းကြီး၊ကို မြို့လည်ခေါင်တွင် တွေ့ရသည်။ အနက်ရောင်ဆေးသုတ်ထားပြီး၊ ကျမ်းစာကျောင်း ၄ထပ်အဆောက်ဦကြီးဖြင့်၊ သာသနာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။ မြို့နယ်တစ်ဝှိက်တွင် ကာသိုလစ်ဘုရားကျောင်းများ။ ကျမ်းစာကျောင်း၊ သီလရှင်ကျောင်းများရှိသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ် .. ရန်ကုန်မှ၎နာရီ ကားလမ်းခရီးစဉ် (April -2014)
IT University မြစ်တစ်ဖက်ကမ်း ကြိုးတံတားဖြတ်မောင်းသွားရသောကျေးလက်ဒေသ၊ ပုသိမ်မှညပိုင်းအပြန် သင်္ကြန်အကျနေ့၊ ဖြေဖျော်ရေးမဏ္ဍပ် လူတိုးကြိတ်ကြည့်ရှုစဉ်၊ ပုသိမ်မြို့လယ်ရှိ ကမ်းနားလမ်းရွှေလမ်း ဆန်စက်ကြီး (ဆရာဝန်တစ်ဦး၊ ဆေးမကုတော့ပဲ ဆန်ကုန်သည်၊ ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်၊ လယ်ယာ၊သားငါးလုပ်ငန်းများအကြောင်းပြောပြခဲ့သည်)။ ရွှေစင်လမင်း စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် (ဖျာပုံမှ သူဌေးလူပျိုကြီးပိုင်ဆိုင်သော ဆိုင်၅ခုမှ တစ်ခု) အမျိုးသမီးငယ်များ ဝန်ထမ်းလုပ်ကြသည်။ လယ်တောများ၊ ငါးမွေးကန်များ၊ အဆက်မပြတ်သွားနေသော ကားကြီး၊ ကားငယ်များ၊ ညောင်တုန်း၊ ဧရာဝတီမြစ်ကူးတတားကြီး၂ခု၊ ဦးသန့် (ကူလသမဂအကြီးကဲ) မွေးရပ်မြေ ပန်းတနော်မြို့၊ ကျောင်းကုန်း၊ ကန်သုံးဆင့်၊ ပုသိမ်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊ တောင်ပေါ် န.တ.ခ၊ ပုသိမ်စက်မှုဇုံ၊ အလုပ်သမ၃၀၀၀ အလုပ်ပေးသည့် ဖွင့်လစ်ကာစ အထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့် စက်မှုဇုံ၊ ရုံးကြီး၊ မတိုးတက်သေးသော မြို့တော်ကြီးဖြစ်သည်။အလွန်ကြီးမားသော လူသားအရင်းမြစ်ကြီးရှိရာဒေသဖြစ်သည်။ ကရင်တိုင်းရင်းသားများစွာ၊ ကရင်နှစ်သစ်ကူးချိန် ပုသိမ်သို့လာရောက် နှစ်သစ်ကူးပွဲ ဆင်နွဲကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဆန်အိုး၊ ပြည်ပသားငါး၊ ပင်လယ်လုပ်ငန်းများစွာ ရှိသည် ဧရာဝတီတိုင်းသည် စစ်သားအမြောက်အများထုတ်လုပ်သော Human Resource အခြေပြုရာ ဒေသလဲ ဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီတိုင်းမှ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များစွာ ပေါ်ထွက်လာရာဈ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု၊ ကုလအကြီးအကဲဦးသန့် တို့ဖြစ်သည်။ ယခုခေတ် နာမည်ကျော် သမ္မတဦးသိန်းစိန် ငပုတောမှ ၁၀တန်းကျောင်းလာတက်သည့် ပုသိမ်မြို့၊ အ.ထ.က(၁)သို့ နောက်တစ်ခေါက်တွင် သွားကြည့်ပါဦးမည်။
မိတ်ဆွေ၂ယောက်တွေ့လိုက်ရင်၊ တစ်ယောက်မကောင်းတာပဲ အရင်မြင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကောင်းတာတွေပဲပြောဆိုဆွေးနွေးကြတယ်။ မကောင်းတာတွေတော့ ရင်ထဲမှာသိမ်းထားမယ်၊ အခုလည်း နေပြည်တော်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရောက်ချိန် လွင်ပြင်ခေါင်ခေါင်မှာ မြန်မာ့လူသားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ထမ်းများကို အစွန်ဆုံးနေရာကို ချထားပေးတဲ့အတွက် သိပ်သဘောမတွေ့ပါဘူး။ တကယ်တော့ Labor (Human Resource) လူတော်လူကောင်းများ မွေးထုတ်၊ စီမံတဲ့ ဝန်ကြီးဌာနမှာ လူတွေစည်ကားနေသင့်ပါတယ်။ ထားပါတော့။
မနက်စောစောစောမှာ ဝန်ကြီးဌာနပိုင်တဲ့ ဘတ်စကားကြီးတွေနဲ့ အလုပ်သမားများကို အရင်ပို့ပေးပါတယ်။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်လေးတစ်ခုမှာ ဒေါ်သက်သက်ခိုင်နဲ့ စကားပြောခဲ့ရပါတယ်။ ရေနံချောင်းမြို့မှာ လူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးကို စိတ်ဝင်တစား၊ အားမာန်အပြည်နဲ့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးပါ။ နိုင်ငံခြားအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေ ပို့ပေးနေသူ ဒေါ်ဌေးဌေးယုစံနဲ့ မိတ်ဆက်ကြချိန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာ B.Com ဘွဲ့စာသင်တန်းသား၊ သူငယ်ချင်း၂ဦး နှစ်ပေါင်း၃၀ကျော် အကြာမှာ ပြန်တွေ့ကြပါတယ်။ လူသားအရင်းအမြစ်တွေ အလုပ်သမားတွေကို ပြည်ပပို့ဆောင်နေတဲ့ ဝန်ကြီးဌာနအရာရှိနဲ့ ပုဂလိက ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ၂ဦး ငယ်အကြောင်းရာများ ပြောဆိုကြပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ လူတော်လူကောင်း၊ အလုပ်သမားများစွာကို သင်တန်းကျောင်းများဖွင့်လစ်ပြီး အရည်သွေးမြှင့်တင်ပေးနေသူ အမျိုးသမီးကြီး၂ဦးပုံကို အမှတ်တရထည့်လိုက်ပါတယ်။
နေပြည်တော် သပြေကုန်းဈေးကို အမေရိကန်က Shopping Center များနဲ့ တော်တော်ဆင်တူပါတယ်။ လူလည်းသိပ်မမြင်ရ၊ ကားတွေပဲမြင်ရပြီး၊ ကားရပ်ဖို့နေရာအကျယ်ကြီးတွေ့ရပါတယ်။ Ocean စားသောက်ဆိုင်ကြီးရောက်စဉ်ကလည်း လူမရှိသေးတဲ့ စားသောက်ဆိုင်၊ ဈေးဆိုင်ကြီးပါ။ သပြေကုန်းဆိုင်များကတော့ လူတော်တော်စည်ကားတယ် ပြောရပါတယ်။ အင်တာနက်အမြန်ဆုံးလိုင်းများ နေပြည်တော်မှာရှိတယ်။ ကမ္ဘာ့အကျယ်ဆုံးလမ်းမကြီးများ (၁၀လမ်းပြိုင်) ရှိနေတယ်။ အိမ်ဈေးများကတော့ သိန်း၂၀၀ဆိုရင် ဝယ်လို့ရပါပြီ။ နောာင်အနှစ်၂၀မှာ ကြီးပွား၊ လူများလာဖို့ ပီကင်းမြို့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၀ပုံစံပဲဆိုပြီး ကမ္ဘာ့သတင်းစာဆရာများက ပြောပါတယ်။ တကယ်လဲဟုတ်ပါတယ်။ ဒါလောက်ကြီးအောင် ဘာလို့လုပ်ထားသလဲ။ ခရိုနီတွေ အခမဲ့ဆောက်ပေးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဟိုတယ်ဇုံက ဟိုတယ်တွေတော့ ခရိုနီများ မဆောင်မနေရ ဆောက်ထားရပုံပေါ်ပါတယ်။ လူတွေကတော့ တစ်ည ၅ထောင်ကျပ်ပဲ ပေးရတဲ့ စည်ပင်တည်ခိုခန်းတွေမှာပဲ တည်းကြတယ်။ ခရိုနီများက သူတို့မိတ်ဆွေ အာဏာပိုင်များကို ဧည့်ခံရင်တော့ အဲဒီဟိုတယ်များမှာ တစ်ည ကျပ်၎သောင်း အနည်းဆုံး ပေးပြီး တည်းခိုစေပါတယ်။ အမ်တီဘီ၊ ညကလပ်တွေလည်း အများကြီးရှိတယ်ပြောတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ဝန်ထမ်းဖြစ်စဉ် ဇေယျ၉၃ သူငယ်ချင်း ဦးတင်ဌေးဦး (ရေအရင်းမြစ်ဌာန) ကျေးဇူးကြောင့် ဦးအောင်ခိုင်ဆွေ (မြန်မာ့အသံ သတင်းကြေငြာခဲ့သူ) ပြုစုခဲ့တဲ့ ဇေယျာ၉၃ မှတ်တမ်းစာအုပ်ကို ပြန်ကြည့်မိတယ်။ အတွဲ (အိမ်ထောင်ကျသွားသူ ၅တွဲ) ရှိပါတယ်။ ၁၉၈၂ နွေကျောင်းပိတ် ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်က အိမ်မဲမြို့နယ် စာတတ်မြောက်ရေး (အ သုံး လုံး) လုပ်အားပေး သူငယ်ချင်းများပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါတယ်။
Good Attitude Mother) ယနေ့မိခင်များနေ့ဂုဏ်ပြုပွဲ ဘုရားကျောင်းများတွင်ကျင်းပသည်။
ဧမာနွေလ (IBC - Yangon) ဘုရားကျောင်း - ဆရာတော် ခရစ်စတီး က တရာဒေသနာအဖြစ် မိခင်များကို အောက်မေ့ဘွယ်၊ သီလနှင့်ပြည့်စုံသောမိန်းမ သုတ္တံ၃၁ကို အခြေပြုသည်။ ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် ပညာတ်တရားအားလုံး၏ အချုပ်အချာဖြစ်သည်။ ချစ်၊ကြောက်၊ရိုသေလေးစားသော ကြောက်ရွံ့ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ မိခင်များနှင့် ကွယ်လွန်သွားသောမိခင်များကို အောက်မေ့သတိရ ဆုတောင်းခြင်းကို နားညောင်းတော်မူပါ။ ပညာရှိစကားများကို ချိုသာစွာပြောနိုင်စေရန်၊ မေတ္တာတရားကို အရင်းခံရာတွင် ယခုခေတ် ကျေးဇူးတော်ခေတ်တွင် မိမိအပြစ်များကို ဖော်ပြဝန်ချတောင်းပန်ပါက လွတ်ပေးမည်၊ ကောင်းကြီးပေးမည့် ကျေးဇူးတော် ခေတ်ကာလဖြစ်သောကြောင့် အံ့သြဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းပိုက်ကို သုတ္တံ၃၁ သီလနှင့်ပြည်စုံသောမိန်းမ ကို တပိုဒ်ချင်းဖတ်ရှုပြီး ဆင်ချင်၊ အောက်မေ့ သတိရနိုင်ပါစေဟု မိခင်များနေ့ ဒေသနာဟောကြားသွားပါသည်။
သားသမီးများအတွက် ကျမ်းပိုဒ် - မိမိ၏ မိခင်သည် မိမိအတွက် သီလနှင့်ပြည်စုံသောမိန်းမဖြစ်သည်။
၁ဝသီလနှင့် ပြည့်စုံသော မိန်းမကို အဘယ်သူတွေ့ရသနည်း။ ထိုသို့သော မိန်းမသည် ပတ္တမြား ထက်အဘိုး သာ၍ ထိုက်ပေ၏။ ၁၁သူ၏ ခင်ပွန်းသည် သူ့ကိုယုံ၍၊ ဆင်းရဲခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ ၁၂ထိုမယားသည် မိမိခင်ပွန်း အကျိုးကို မဖျက်၊ တသက်လုံးပြုစုတတ်၏။ ၁၃သိုးမွေးနှင့်ဝါကို ရှာ၍၊ မိမိလက်နှင့် အလိုအလျောက် လုပ်တတ်၏။ ၁၄ကုန်သည်သင်္ဘောကဲ့သို့ ဖြစ်၍၊ စားစရာကိုဝေးသောအရပ်မှ ဆောင်ခဲ့တတ်၏။ ၁၅မိုဃ်းမလင်းမှီ ထလျက်၊ အိမ်သူအိမ် သားတို့အား စားစရာကို၎င်း၊ ကျွန်မတို့အား အငန်းအတာကို၎င်း ပေးဝေတတ်၏။ ၁၆ကောင်းမွန်စွာ ဆင်ခြင်၍၊ လယ်ကွက်ကို ဝယ်ယူတတ်၏။ ကိုယ်တိုင်လုပ်၍ ရသောငွေနှင့် စပျစ်ဥယျာဉ်ကို ပြုစုတတ်၏။ ၁၇မိမိခါးကို ခွန်အားနှင့် စည်း၍၊ မိမိလက်တို့ကို သန်မြန်စေတတ်၏။ ၁၈မိမိလုပ်သော ဥစ္စာကောင်းသည်ကို ရိပ်မိ၍၊ သူ၏ မီးခွက်သည် တညလုံး မသေတတ်။ ၁၉ချည်ဖြစ်စေတတ်သော တန်ဆာတို့ကို ကိုယ်လက်နှင့် ကိုင်၍ လုပ်ဆောင် တတ်၏။ ၂ဝဆင်းရဲသော သူတို့အား လက်ကိုဖြန့်၍၊ ငတ်မွတ်သော သူတို့အား လက်ရုံးကို ဆန့်တတ်၏။ ၂၁မိုဃ်းပွင့် ကျသော်လည်း၊ မိမိအိမ် သူ အိမ်သားတို့အတွက် မစိုးရိမ်။ အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည် ကတ္တီပါနီကိုဝတ်ကြ၏။ ၂၂ကိုယ်အဘို့စောင်တို့ကို ရက်၍၊ ပိတ်ချောနှင့် မောင်းသောအထည်ကို ဝတ်တတ်၏။ ၂၃သူ၏ ခင်ပွန်းသည်လည်း မြို့တံခါးတို့၌ ပြည်သားအသက် ကြီးသူတို့နှင့် ထိုင်၍၊ ထင်ရှားသောသူဖြစ်ရ၏။ ၂၄ချောသောအထည်အလိပ်ကို ရက်၍ရောင်းတတ်၏။ ခါးစည်းတို့ကို လည်း ကုန်သည်၌ချတတ်၏။ ၂၅သူလုပ်သော အထည်အလိပ်သည် ခိုင်ခံ့၍၊ လှသော အဆင်းနှင့် ပြည့်စုံသဖြင့်၊ သူသည်နောင်ကာလ၌ ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။ ၂၆ပညာစကားကို ပြောတတ်၍၊ မေတ္တာတရားအားဖြင့် နှုတ်မြွတ်တတ် ၏။ ၂၇အိမ်သူအိမ်သား ပြုမူသမျှတို့ကို ကြည့်ရှုတတ်၏။ ပျင်းရိခြင်း အစာကိုမစားတတ်။ ၂၈သူ၏ သားသမီးတို့သည် ထ၍၊ အမိကိုကောင်းကြီးပေးတတ်ကြ၏။ သူ၏ ခင်ပွန်းကလည်း၊ ၂၉လူမျိုးသမီးအများတို့သည် ကောင်းမွန်စွာပြုကြပြီ။ သို့ရာတွင်၊ သင်သည် ထိုသူအပေါင်းတို့ကို လွန်ကဲသည်ဟု သူ့ကိုချီးမွမ်းတတ်၏။ ၃ဝယဉ်ကျေးသောအရာသည် လှည့်စားခြင်းနှင့်ယှဉ်တတ်၏။ လှသောအဆင်းသည်လည်း အချည်းနှီးဖြစ်၏။ ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့သောမိန်းမ မူကား၊ ချီးမွန်းခြင်းကို ခံရလိ့မ်မည်။ ၃၁ထိုသို့သော မိန်းမကျင့်ရာ အကျိုးကိုပေးလော့။ သူပြုသော အမှုသည် မြို့တံခါး တို့၌ သူ၏ အသရေကို ထင်ရှားစေသတည်း။
မိခင်များကို ဂုဏ်ပြုလျှက် (Good Attitude Mother)
ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းသောဘဝသို့ ခရစ်တော်အားဖြင့် - ဆရာအော်နယ်ညို
သမ္မာကျမ်းညွှန်းများ စာအုပ်က၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း Depression အကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ဝေငှခဲ့ပါတယ်။ စင်ကာပူ ဆရာမဆဲဖွယ် ဆဲလ်ဝတ်ပြုခြင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ယခုခေတ်ဟာ ရွေးချယ်စရာမြောက်များစွာ ပေါ်လာနေပြီး၊ ခရစ်ယာန်အသင်းတော် ဂိုဏ်ဂနပေါင်း ၃သောင်းကျော်ရှိနေတဲ့အတွက်၊ ရွေးချယ်ဖို့ရာ ခရစ်တော်ကို ဦးထိတ်ဖို့ အလွန်လိုအပ်ပါတယ်။ အသံနဲ့စာသားများကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာသောမတ်စ်၏ စင်ကာပူ HCF Health Care Fellowship, Cell Group အပတ်စဉ်ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်း အစီအစဉ်မှာ တရားဟောချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင်လည်း လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေသော ကရင်များ၊ ကချင်များ တိုက်ပွဲများတွင် လူမျိုးများလည်း အရက်၊ ဘိန်း သားကောင်များအဖြစ် ပျက်စီးနေချိန်တွင် ချင်းလူမျိုးများသည် နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသာ ကိုင်ဆောင်သောကြောင့် ကောင်းကြီးများစွာ ခံစားနေရသည်။ ချင်းပြည်နယ်သို့ မိမိရောက်သွားစဉ် ခရီးသည်တင်ကား မထွက်ခင် ကားဒရိုင်ဘာက ဓမ္မဆရာ Pastor ပါသလား ဟု ခရီးသည်များကို မေးမြန်းသည်။ ခရီးသည်ထဲမှ ဓမ္မဆရာက ကားခရီးလမ်းအတွက် ဆုတောင်းပေးပြီးမှ ကားကိုစတင်ထွက်သည်။ အလားတူ မီဇိုပြည်နယ်စပ်တွင်လည်း ကားဆရာများက အလားတူ၊ ကားလမ်းခရီးထွက်ခါနီး ဓမ္မဆရာဖြင့် ဆုတောင်းခံယူပြီးမှ ခရီးထွက်သည့် အလွန်ကောင်းသော အကျင့်ကိုတွေ့ရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ ဗေရိမြို့သားများကဲ့သို့ ဘုရား၊ နှုတ်ကပါတ်တော်ကိုစေ့စေ့ကြည့် ကိုးကွယ်သူများဖြစ်သည်။ သုတ္တံကျမ်း ၁၃း၁၃ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူများ ပျက်စီးရပြီး၊ ပညာတ်တော်ကို လိုက်လျှောက်သူများ ကောင်းစား၊ ချမ်းသာရမည်ဟု ကျမ်းစာတွင်ရေးထားပါသည်။ မုရန် (27-Feb-2014)
ကျမ်းစာ App ကို စင်ကာပူ JBCS Media မှ PocketSword App ၂၀၁၂တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ March 13, 2013 တွင် ပေါ်လီကျောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်သူ မဘူးဘူ (Facebook: KingOfMyHeart) သည် JBCS Media ကျမ်းစာအချက်လက်များကို အသုံးပြုပြီး ကမ္ဘာအနှံ့မြန်မာများအတွက် ကျမ်းစာ App လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ စင်ကာပူရှိ မြန်မာ Full Gospel အသင်းတော်တွင် ပါဝင်ဆပ်ကပ်သူ ဖြစ်သည်။ သူမက ကျမ်းစာနှင့်ပတ်သက်လျှင် App အားလုံး Free Download ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ပြီး ကချင်ကျမ်းစာ၊ ကရင်(စကော)ကျမ်းစာ App များကို ဆက်တိုက် ပရိုဂရမ်ရေးပေးခဲ့သည်။ မဘူးဘူ သည် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့မှဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၄တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်တွင် ဆက်လက်ပညာဆည်းပူးနေပါသည်။ သူမနှင့် ကူညီပေးသူအားလုံးအတွက် သတိရဆုတောင်းပေးကြရန် ဖြစ်သည်။
အမှတ်တရ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးယုဒသန် ပထမဆုံးသင်းအုပ်ဆရာအဖြစ်အမှုတော်ထမ်းခဲ့ပြီး၊ အမှတ်၆ အ.ထ.က ကျောင်းနဲ့အတူ ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေခဲ့တဲ့၊ အသင်းတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံအသင်းတော်များစွာ အမြင်လှပစေဖို့ တတ်နိုင်သမျှ ဘတ်ဂျတ်နဲ့ ကြည့်ကောင်းအောင်ဆေးပြန်လည်သုတ်၊ မွမ်းမံပြီးကြပါပြီ။ မော်လမြိုင်အသင်းတော်အတွက် စင်ကာပူဒေါ်လာထောင်ဂဏန်းမျှသာ မတည်ပေးဖို့ စင်ကာပူရောက်၊ အသင်းသားများကို တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ မော်လမြှိုင်မြို့ဟာ မကြာမီ ဘုရားသုံးဆူတောင်ကြားလမ်း ထိုင်း-မြန်မာ လမ်းပွင့်ပြီးရင်၊ ပင်လယ်ကူးဆိပ်ကမ်းဖြစ်လာပြီး တိုးတက်လာမဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းတော်မှာ လူပေါင်း ရာနဲ့ချီပြီး လာရောက်တည်းခိုလေ့ရှိပါတယ်။ သင်္ကြန်နှစ်သစ်ကူးနေ့မှာ အသင်းသားများ နယ်သို့ camp ထွက်သွားကြတဲ့အတွက် Good Friday ကို နံနက်အာရုံဝတ်ပြုပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နေ့ခင်းဝတ်ပြုပွဲကိုတော့ အဝေးရောက် camp မှာပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း တနင်္ဂနွေအတွက် သတိရအောက်မေ့ပါတယ်။
သင်းအုပ်ဆရာကြီး Rev. ဦးကြည်ရှိန်၊ တာဝန်ခံကိုသားငယ်၊ ဦးဂျူလီယုံ၊မခင်မွန်(စင်ကာပူ)ရဲ့ ညီအစ်ကို၊ ညီမ၂ဦး၊ ကိုလေးဝါးထူး၊ မသင်းသင်းထူး (JBC အတွင်းရေးမှုး) ရဲ့ ဆွေမျိုးများကို တွေ့ဆုံမိတ်သဟာရ ပြုခဲ့ပါတယ်။ အသင်းတော် တယ်လီဖုန်း ၀၅၇ ၂၆၇၃၃
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ နံပါတ်(၁) ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အတူခရီးသွားသူများကို ခရစ်တော်နဲ့ အခြားဗုဒ္ဒ၊ မိုဟာမက် တို့မတူညီပုံကို သက်သေခံပြောခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘုရင်၊ အကြီးအကဲရဲ့ သားတော်များအဖြစ် ခမ်းနားစွာမွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ လူအများရဲ့ ဦးညွတ်မှုကိုခံယူ၊ တပည့်တပန်းများရဲ့ ပြုစုမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သာမန်လူများလို အသက်ရွယ်ကြီးရင့်ပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ခရစ်တော်ကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ နွားစားခွက်မှာ နှိမ့်ချစွာဖွားမြင်တော်မူပါတယ်။ တပည့်တပန်းများကို သူကပဲပြုစုပေးပြီး၊ တပည့်တော်၁၂ပါးရဲ့ ခြေထောက်ကို နှိမ့်ချစွာ ဆေးကြောပေးခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်စဉ် အသက်၃၃နှစ်မှာ လောကသားအားလုံးအတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် နိုမ့်ကျစွာ အသေခံခဲ့ပါတယ်။
သခင်ယေရှုရဲ့ အသွေးတော်၊ အသားတော်များကို နာလည်ဖို့ခက်ပါတယ်။ ယုံကြည်သူများသာ နားလည်ပြီး ထာဝရအသက်ကို ခံစားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမမြန်မာအသင်းတော် (မော်လမြိုင်) အတွက် သတိရဆုတောင်းဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လောကဧည့်သည် Pilgrim's Progress (ခရီးသွားများ-လိုက်နာရန်)
ဤလောကကြီးကို ကျွန်ုပ်တို့ ခဏတာရောက်လာချိန်တွင် အချို့ အသက်ရွယ်ငယ်စဉ်ကတည်းက ဝန်လေးပင်ပမ်းလှသော လောကဝန်ထုတ်ကို လေးပင်စွာထမ်းပြီး လျှောက်ခဲ့ရသည်။ ငယ်စဉ် မိဘ၊ဆွေမျိုးများ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ပညာသင်၊ စားသောက်နေထိုင်ရစဉ်က လူအများစုမှ ဝန်လေးပင်ပန်းခြင်းမရှိသလောက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်လည်း ငယ်စဉ်က ဝန်လေးခြင်းမရှိခဲ့ပဲ၊ ဘုရားနှင့်ဝေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော် မိမိကိုယ်ကို အားကိုးသောဘဝမှ အသက်ရွယ်ရလာချိန်တွင် မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း သိလိုက်ရသည်။
စာမျက်နှာ ၂၄၂ ရှိသောစာအုပ်ကို ဆရာဦးအောင်သက်ညွန့်မှ ဆရာမျိုးသူထံသို့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေများ ဖတ်ရှုရန် အပိုင်းခွဲပြီး ဒေါင်းလုပ်ဖို့ တင်ပြပါမည်။ ထိုစာအုပ်ကို မူလထုတ်ဝေသူ အောင်သုခလမ်း၊ ၉မိုင်၊ မရမ်းကုန် ဖုန်း +၉၅ ၆၆၃၀၉၁ သို့ အမှာစာ ပို့ပြီး မိမိချစ်မိတ်ဆွေများကို စာအုပ်ဝယ်ယူ လက်ဆောင်ပေးရန်၊ အားပေးလိုက်ပါသည်။ မုရန်...
20 pages of 262 can download